Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-egbu egbu nke akụkụ dị mkpa - Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-egbu egbu nke China, ndị na-ebubata ya.
Ngwa gburugburu ejiri ụdị ọkụ na-egbu bearings
Wanda egbu egbu bearings abụwo mgbe niile site n'echiche nke ndị ahịa iji zute mmepụta na nnyefe ndị ahịa, na àgwà ngwaahịa na-amata nke ọma site n'aka ndị ahịa.
XZWD|ODM ahaziri slewing mgbanaka WD-061.20.1094F mkpa ụdị ibu
Anyị nwere ike ịmepụta ihe na-egbu egbu dị elu.WD-061 Series nwere ihe ndị a:
Ihe owuwu: ebe anọ na-eji bọọlụ egbu egbu
Gear ezé: mpụga
Ụdị akara: akara abụọ
Ihe onwunwe: 50Mn/42CrMo/C45
Nkọwa ngwaahịa: Igwe na-egbu egbu dị arọ dị mma maka nhọrọ injinịa dịgasị iche iche ma dị mma karịsịa mgbe ịdị arọ bụ ihe dị mkpa, XZWD Bearing ọkachamara ọkachamara banyere igbu egbu egbu na-ekwe nkwa na ị nwere ike ịdabere na akụkụ kachasị mma maka ngwaahịa gị na ọrụ injinia na-akpata ya. ngagharị na arụmọrụ kacha mma.
Ụdị ọkụ nkenke na-ebu ọkụ na-enweghị gia
1. Mgbochi na-egbu egbu aha ya bụ mgbanaka igbu egbu, mgbanaka na-egbu egbu, ihe na-agba agba.
2. Anyị nwere ike ịnye Slewing bearing surface and teeth treatment
3. OEM dị
4. Akwụkwọ ikike anyị bụ ọnwa 12
5. ISO9001: 2015, CCS, SGS na ndị ọzọ iri atọ ọzọ nnyocha dị.
Ụdị ọkụ na-agba ọkụ na ngwa mpụga (WD-061) maka igwe nri
1. Light ụdị a na-akpọkwa mkpa ngalaba Slewing bearing
2. Ọ nwere otu ihe owuwu na Single ahiri Ball slewing bear
3. Ụdị ọkụ Slewing bearing nwere obere arọ, na-atụgharị na-agbanwe agbanwe
4. A na-eji akụkụ dị mkpa na-egbu egbu egbu na ngwa nri, igwe canning na igwe gburugburu ebe obibi.
5. Akwụkwọ ikike anyị bụ ọnwa 12
Mpụga AFỌ na-egbuchapụ ezì NGWA NKE ime 232.
XZWD slewing bearings na usoro ọkọlọtọ 232 nwere ahịrị bọọlụ nwere isi anọ nwere naịlọn spacer.
Ngwaahịa ndị a bụ mgbanaka adịgboroja, na-edozi ya ka ọ bụrụ ihe owuwu, nwere akụkụ ime, akụkụ square, mgbanaka gia siri ike na mgbanaka flange mpụta.A na-enye bearings XZWD na griiz lubricated tupu oge eruo n'usoro ọkọlọtọ 232.
Usoro ọkọlọtọ 232 XZWD rotary bearings nwere ezigbo nguzozi n'etiti arụmọrụ na isi ike, yana naanị otu mgbanaka flange dị n'èzí.
Ezigbo uru nke ihe owuwu ahụ bụ na ọ dị mfe ịgbakọta, na akara okpukpu abụọ pụtara na ọ nwere ike ọbụna tinye ya n'èzí ma ọ bụ na gburugburu uzuzu.
XZWD 232 ọkọlọtọ usoro slewbacks nwekwara ike ịtụgharị na oke ọsọ (30 RPM) n'okpuru obere ibu.
3. OGE NKWUKWU
A na-eji usoro 232 ọkọlọtọ XZWD slewing slewing na-eji ngwa dị iche iche, dị ka:
* Tebụl ịgbado ọkụ;
* Ụlọ ọrụ akpaaka usoro;
* Ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa;
* kreenụ ọkụ;
* kreenụ na-ebugharị onwe ya dị ọkụ;
* Igwe ọkụ ọkụ;
* Igwe mkpuchi;
MGBE NGWA NGWA NA-EJI KWESỊRỊ INU INER 231 Series
1. Nkọwa nke usoro 231
XZWD slewing bearings na 231 ọkọlọtọ usoro nwere otu ahịrị nke anọ kọntaktị bọl bearings na spacers na naịlọn.Ngwaahịa ndị a gụnyere mgbanaka adịgboroja, nke a na-arụ ọrụ iji mepụta ihe owuwu nwere akụkụ mpụta, akụkụ square, mgbanaka eze siri ike yana mgbanaka flanged dị n'ime.A na-ebunye bearings ogbugbu XZAD na usoro ọkọlọtọ 231 tupu tee ya.
XZWD na-egbu egbu na usoro ọkọlọtọ 231 na-anọchite anya nkwekọrịta dị mma n'etiti arụmọrụ na isi ike, yana naanị otu mgbanaka flanged.Ezigbo uru nke ihe owuwu a dị na mgbakọ ya dị mfe, ebe akara okpukpu abụọ pụtara na ọ nwere ike itinye ya ọbụna n'èzí ma ọ bụ uzuzu uzuzu.XZWD 231 usoro ọkọlọtọ slewing mgbanaka nwekwara ike bugharia na 30rpm n'okpuru obere ibu.
Mgbanaka egbugbere ọnụ flange nwere otu ihe ahụ nwere mgbanaka bọọlụ anọ na-egbu egbu, mana ịdị arọ ya dị mfe ma enwere ike iji ya maka ngwa ngwa ụdị ọkụ ụfọdụ:
* igwe nri;
* usoro ụlọ ọrụ akpaaka;
* cranes dị arọ;
* kreenụ ndị na-ebugharị onwe ha dị fechaa;
* igwe canning;
* igwe anaghị agba nchara;
Ugboro abụọ Flange SLEWING biarin nwere SINGLE bọl agba n'usoro, NO gia ezé, STANDARD 230 usoro
XZWD slewing bearings na 230 ọkọlọtọ usoro nwere otu ahịrị nke anọ kọntaktị bọl bearings na spacers na naịlọn.Ha na-agụnye mgbanaka adịgboroja, bụ nke a na-arụ ọrụ iji mepụta nhazi nke mgbanaka abụọ ahụ nwere flanged, na-enweghị ezé gia.A na-ebunye bearings XZWD na usoro ọkọlọtọ 230 tupu tee ya.
XZWD slewing bearings na usoro ọkọlọtọ 230 na-anọchite anya nkwekọrịta dị mma n'etiti arụmọrụ na nkwụsi ike, n'ihi nnukwu mgbanwe ha na mgbakọ dị mfe n'ihi okpukpu abụọ.Akara ha abụọ pụtara na enwere ike itinye ha n'èzí ma ọ bụ gburugburu uzuzu.XZWD 230 ọkọlọtọ usoro igbu egbu egbu nwekwara ike ịtụgharị na oke ọsọ (30 rpm) n'okpuru obere ibu.
XZWD|Ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu na-emepụta ihe na-egbuke egbuke
Onye na-egbu egbu nwere ike inye nkwado dị ukwuu na mgbanaka igbu egbu maka onye ọ bụla n'ime anyị!
Ọnụ maka mgbake!
Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla chọrọ.
XZWD |Ụdị mgbanaka na-egbu ọkụ WD-060.20.0544 dị ka VSU20 RKS.060 IMO11-20
Igwe ọkụ na-egbu ọkụ nwere otu usoro nke nwere otu ahịrị ebe anọ na-agba bọọlụ, mana ịdị arọ ahụ dị mfe ma enwere ike iji ya maka igwe ụdị ọkụ ụfọdụ.
A na-ejikarị mgbanaka igbu egbu ọkụ na:
1. Igwe nri
2. Igwe ihe eji eme ihe
3. Igwe gburugburu ebe obibi
4.Car-adọba ụgbọala usoro, wdg
Enwere ike iji ya maka igwe ọrụ ọkụ ndị ọzọ.